Thwebula RAR 5.50 – Android – Vessoft
RAR – isofthiwe enamandla futhi Amatebhe ukusebenza kanye ezinqolobaneni. RAR kwenza ukudala noma ukukhipha inqwaba takhiwo standard futhi isekela umsebenzi kanye yokugcina ZIPX hlobo. Isofthiwe inikeza esiphezulu zlib ukusebenza, okuyinto kufezwa ngokusebenzisa cores eziningana processor. RAR kwenza ukuba ngemfihlo amagama ifayela, ukuvikela archives nge password ngokumelene khipha impahla kanye ulungiselele nezinye izinketho ngesikhathi zlib of amafayela. Futhi isofthiwe iqukethe amathuluzi ukuze alulame ezinqolobaneni lilimele bese uhlole amafayela zahlanganiswa ubuqotho. RAR i kulula ukusebenzisa interface futhi ezahlukene izikhumba ukushintsha background.
Usekela iningi archive takhiwo
Choice of zlib
Lokubuyisela of archives obonakele
Kutakhela archives zombhalo
Ukubuka okuqukethwe amafayela onomfutho
Amazwana on RAR:
RAR Ahlobene software:
English, Українська, Deutsch, Русский... CCleaner 1.16.62
English, Українська, Français, Italiano... Mobogenie 3.1.18.1
English, Français, Español, Português... Show Box 4.82